माओवादीसँग एकता गरौं: देवेन्द्र पौडेल
नयाँ शक्तिका नेता देवेन्द्र पौडेल लगायतको समूहले संयोजक बाबुराम भट्टराई माओवादी केन्द्रसँग एकता र सहकार्यका लागि लचक बन्न आग्रह गरेको छ।
बिहीबार काठमाडौंमा केही पत्रकारहरूसँग बोल्दै नेता पौडेलले परिवर्तनकारी शक्ति कमजोर बनेको भन्दै सहकार्य र एकताका लागि लचक हुन आग्रह गरे । १५ जना केन्द्रीय परिषद सदस्यका साथ उपस्थित भएका नेता पौडेलले पार्टी निर्माणमा अहिलेसम्म भएको उपलब्धि, स्थानीय चुनावमा पार्टीले भोगेको असफलता र असफल भएको उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरमसँगको एकता प्रकृयाको समिक्षा गरेर आफूहरू यो निष्कर्षमा पुगेको बताए।
'एक्लै हिड्ने, चुनावमा कतैपनि जित्न नसक्ने, बलियो पार्टी बनाउन नसक्ने, कोहीसँग सहकार्यका लागि तयार नहुने हो भने हामी कहाँ पुग्छौं?' उनले प्रश्न गरे, 'त्यसैले हामी सहकार्य र एकताका लागि तयार हुनुपर्छ?' उनले अहिलेसम्म पार्टीको पहिचान स्पष्ट नभएको तथा तल्लो वर्ग र उत्पीडित पक्षको पक्षधरता पनि नरहेको भन्दै यसमा समिक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिए।
यही ढंगले अगाडि बढे डा.भट्टराई 'आइसोलेसन'मा पर्ने भन्दै फेरि उत्पीडित समुदायको नेता बन्न सहकार्य र एकताको बाटोमा आउन भट्टराईलाई पौडेलले आग्रह गरे। उनले आफू अहिले तत्काल नयाँ शक्ति छोडेर माओवादी फर्कने पक्षमा नरहेको बताए।
'हामीले भनेको एकता, नभए सहकार्य हो,' उनले भने, 'म अहिले नै नयाँ शक्ति छोडेर माओवादी प्रवेश गर्ने पक्षमा छैन। तर, परिवर्तनका मुद्धामा मिलेर काम गर्न पर्छ।' उनले यो विचार नै नयाँशक्तिको आधिकारिक लाइन भएको पनि दाबी गरे।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन २६, २०७४, ०५:५९:०२